Otu Daybọchị Multiculturalism na Transylvania na-eme ka ndị njem nleta na ndị bi n’otu ọnụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Otu Daybọchị Multiculturalism na Transylvania na-eme ka ndị njem nleta na ndị bi n’otu ọnụ
Akụkọ mkpakọrịta • Na-agbasa News Travel • omenala • Akụkọ Ọchịchị • nzukọ • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Akụkọ gbasara Romania • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
A na-atụ anya na ihe omume njem nlegharị anya na Transylvania ga-adọta ndị mmadụ karịa mba 20 na-abụghị EU, ndị bi na Brasov na ndị na-eleta mpaghara ahụ.
A na-atụ anya na ihe omume njem nlegharị anya na Transylvania ga-adọta ndị mmadụ karịa mba 20 na-abụghị EU, ndị bi na Brasov na ndị na-eleta mpaghara ahụ. Brosov bụ ụlọ nke ndị kasị warara n'okporo ámá na Europe na a zuru okè n'ebe usọrọ.
Ndị mmadụ sitere na nzụlite dị iche iche na Europe ga-eweta na Satọdee, na Piata Sfatului, ọdịnala obodo ha, na omenaala ha iji gosi akara ụbọchị isii nke ụbọchị Multiculturalism Day.
Brașov bụ obodo dị na mpaghara Transylvania nke Romania, nke Ugwu Carpathian na-akụ. A maara ya maka mgbidi na mgbidi ndị Saxon nke oge ochie, ụlọ ụka Gothic dị elu na ụlọ oriri na ọ cafụ liveụ. Piaţa Sfatului (Kansụl Kansụl) dị na obodo ochie gbara nnukwu ụlọ na-agba agba gburugburu ma bụrụ ebe obibi Casa Sfatului, ụlọ ezumezu obodo gbanwere ụlọ ngosi ihe mgbe ochie.
N'ebe ugwu nke Southern Carpathian Mountains na nke mara mma na gothic, baroque na renaissance architecture, yana ọtụtụ akụ na ụba nke akụkọ ihe mere eme, Brasov bụ otu n'ime ebe ndị a kasị eleta na Romania.
Tọrọ ntọala site n'aka ndị Teutonic Knights na 1211 na saịtị Dacian oge ochie ma bụrụ ndị Saxon biri dị ka otu n'ime ụlọ elu asaa a gbara ogige, Brasov na-egosipụta ihu igwe dịpụrụ adịpụ ma bụrụkwa nke ejirila mee ihe na ọtụtụ ihe nkiri oge ndị a.
Ọnọdụ nke obodo ahụ n'okporo ụzọ azụmahịa na-ejikọ Alaeze Ukwu Ottoman na ọdịda anyanwụ Europe, yana ụfọdụ ụtụ isi, nyere ndị ahịa Saxon ohere ịba ọgaranya ma nwee mmetụta ndọrọ ndọrọ ọchịchị siri ike na mpaghara ahụ. E gosipụtara nke a na aha German obodo ahụ, Ugbala, nakwa na aha Latin ya, Corona, nke pụtara okpueze okpueze (ya mere, uwe agha nke obodo ahụ bụ okpueze nwere mgbọrọgwụ osisi oak). E wuru mgbidi gburugburu obodo ahụ ma na-agbasawanye mgbe niile, yana ọtụtụ ụlọ elu dị iche iche site na guild dị iche iche, dị ka ọdịnala ochie si dị.
E wezụga ngosipụta nke mba ha na ejiji ọdịnala, ndị sonyere gosipụtakwara ọkọlọtọ, obere ihe ndị e mepụtara, eserese ọdịnala, ato uto ma ọ bụ ọbụlagodi achịcha ọdịnala, dịka ekpughere na oche na Piata Sfatului.
Ndị bi na Brasov na ndị njem nleta natara "paspọtụ" nke ndị na-ahazi ihe omume ahụ mepụtara, nke gụnyere "visa" na-ejide onwe ya, dịka akwụkwọ ịkpọ oku iji gaa mba ahụ.
“Ihe omume ahụ toro ọtụtụ afọ n’afọ. Ọ bụrụ na mbipụta izizi anyị nwere ike ịnwe ya na Studentslọ Mmụta na Brasov, anyị ga-anọ maka mbipụta 6 a na Piata Sfatului. Ihe a choro di uku site na ndi ala ozo bi na Brasov ma choro ibia ihe omume a, nke na eme anyi obi uto. Anyị bipụtara paspọtụ 500 naanị maka mmemme a, nke gafere otu awa. Thebọchị Multiculturalism Days na Brasov bụ mmemme ndị mmadụ na-eche na ihu igwe dịkwa n'akụkụ anyị maka mbipụta a, "Astrid Hamberger, onye nhazi nke Centre Center for Integration of Foreigners in Brasov, onye nhazi ihe omume ahụ, gwara AGERPRES.
Camilla Salas, 32, si Columbia, ebiela na Brasov afọ abụọ na ọkara gara aga, mgbe ọ lụsịrị onye bi na Brasov. Ọ na-amụ asụsụ Romania na Center Center maka Mmekọrịta nke Ndị Ọzọ.
“Obi dị m ezigbo ụtọ ibi na Brasov. N'ime afọ abụọ na ọkara, enweela m ọtụtụ ndị enyi ebe a. Ezutere m di m na Columbia, ebe ọ rụrụ ọrụ nwa oge. Anabatara m ịbịa Romania na ibi na Brasov ma ọ maara m ahụ ya ngwa ngwa. Ihu igwe abụghị nsogbu. Mgbe oyi na-atụ m putt ọzọ uwe. Obi dị m ụtọ ịnọ ebe a. Maka ekeresimesi na nke abali ohuru anyi ga aga Columbia na teknụzụ anyi nwere taa n’ekwe m ka m gwa nne m na ezin’ulo m okwu kwa ubochi. Obodo m dị iche na Brasov, anyị nwere nkwụ ebe ahụ, mana anyị ga-enwekwa osisi wuruwuru ekeresimesi, "Camilla Salas gwara AGERPRES.
O kwukwara na ya nwere ihe ịga nke ọma n'ime afọ abụọ ịmụ asụsụ nke mba nnabata ya nke ọma, ọkachasị n'ihi ọgọ nna ya, site na Brasov, onye na-anaghị ekwe ka ọ sụọ asụsụ ndị ọzọ karịa Romania, nke na-enyere ya aka nke ukwuu , n'ihi na ọ ga-adị mkpa iji gbaa ajụjụ ọnụ maka inweta nwa amaala Romania n'oge ụfọdụ.
E nyekwara ndị ọbịa bịara na Piata Sfatului ihe ngosi nke egwu ọdịnala sitere na Cuba, Mexico, Philippine, China, Japan, Republica of Moldova, Peru, Dominican Republic na ebe a na-egosi uwe ejiji n'otu ihe nkiri dị na mpaghara ahụ.
Mba ndị dị ka Dominican Republic, Columbia, Syria, South Korea, Japan, Philippine, Peru, Mexico, Republic of Moldova, India, Turkey, China, Ukraine, Jordan, Nigeria, Israel, Egypt, Ecuador, Iran mekwara ihe ngosi. Piata Sfatului.
Mbọchị Multiculturalism Days na Ememe Brasov bu ụzọ were varnishion nke ngosi "Portraits of Migration," nke mere n'abalị Fraịde na Patria Hall na a ga-emechi ya na mgbede Sọnde, na Multicultural Center nke Transilvania University, ebe ga-eme ihe nkiri nke nkiri “Onye Ọbịbịa na Paradaịs,” na-esote arụmụka banyere okwu banyere ndị gbara ọsọ ndụ na Europe.